मतदाता भन्छन् ‘भाषण होईन विकास चाहियो’ « Online Rapti
सडकमा आन्दोलन गर्नको लागि पार्टी नखोल्न पाण्डेको आग्रह
किवानिज क्लबद्धारा तुलसीपुर नयाँ वसपार्कमा रहेको शौचालयको अनुगमन
दाङमा खेलक्षेत्रले पछिल्लो समय फड्को मार्दै
बाँकेमा दाङका एक पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु
मतदाता भन्छन् ‘भाषण होईन विकास चाहियो’
तुलसीपुर, दाङ यतिबेला निर्वाचनमय भएको छ । दाङमा क्षेत्र नं. ३ (ख) मा प्रदेशसभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा वडाध्यक्षका लागि यहि मंसीर १४ गते उपनिर्वाचन हँुदैछ । प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि १२ राजनीतिक दल र २ जना स्वतन्त्र गरी १४ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । यस्तै घोराही १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि पाँच राजनीतिक दल र दुई स्वतन्त्र गरी सात उम्मेदवार चुनावी प्रतिष्पर्धामा रहेका छन् । पाँच नम्वर प्रदेश सभा सदस्य उत्तर कुमार वलीको सवारी दुर्घटना र घोराही १६ का वडा अध्यक्ष लक्षिन बुढाको विरामीका कारण निधन भएको थियो ।
दुई स्थानमा हुने उपनिर्वाचनका लागि ७३ हजार १ सय ७२ जना मतदाता रहेका छन । जस मध्ये क्षेत्र न ३ (ख) मा ६८ हजार ७ सय १९ र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा ४ हजार ४ सय ५३ जना मतदाता रहेका छन । सवै उम्मेदवाहरु आ.आफनै पक्षमा मत माग्ने र चुनाव जित्ने होडबाजीमा लागेका छन् । नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय स्तरका नेताको जम्वो टोली नै दाङ्ग ल्याएको छ भने नेकपाले भने साना तिना आमसभाहरु गरिरहेको छ । उनीहरुले आफुले चुनाव जित्ने दावीका साथ चुनावी आम सभा, प्रचारप्रसार, घरदैलो कार्यक्रमहरुलाई जारी राखेका छन् ।
उम्मेदवारहरुले आआफनो जित्ने दावी गरेता पनि मुख्यगरी सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस विच प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित भएको जानकारको भनाई छ । राजनीतिक दलका तर्फबाट बनेका उम्मेदवारहरु दलबल सहित गाउँगाउँमा आम सभा र मतदाताको घरघरमा पुगेर भोट माग्न थालेका छन् । साथै उनीहरुले विभिन्न स्थानमा पार्टीको शक्ति प्रर्दशन समेत गरेका छन् । सवैको ध्यान अहिले पश्चिम तर्फ केन्द्रित भएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि आफनो पक्षमा मत माग्दै चुनावी प्रसारप्रसार जुटेका छन् । सत्तापक्ष दल नेकपा , प्रमुख प्रतिपक्ष दल काग्रेस ,राप्रपा, समाजबादी पार्टी, राप्रपा सयुक्त, नेपाली काग्रेस विपि लगाएतका दलका उम्मेदवारहरुले जनता सामु विभिन्न विकासका नारा लगाउदै आफनो पक्षमा भोट माग्न दौडधुप गरेका छन् ।
त्यति मात्रै होईन उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप समेत लगाएको समेत पाईन्छ । जनता सामु पुगेर उमेदवारहरुले विभिन्न आश्वासन दिईरहेका छन् । विकास निर्माण देखी शान्ती, न्याय र सुशासनका अनेकौ सपनाहरु जनतालाई बाँडिरहेका छन् । चुनावी सभा,घरदैलो, मतदाता भेटघाट लगाएतका कार्यक्रममा नेता र उम्मेदवारहरुले राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै भोषण गदै आएका छन् । तर मतदाताहरुले भने कसैलाई पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
विगतमा पनि विभिन्न समयमा भएको निर्वाचनमा नेताहरुले भाषण गरेको स्मरण गदै तुलसीपुर २ का नोखिराम खड्काले जति जोगि आएपनि कानै छिरेको भन्ने नेपाली उखानलाई चरित्रार्थ गरेका छन् । उनले आफनो गाउँको सिचाई कुलो बिग्रिएको ३६ बर्ष को बताउदै अहिले सम्म कुलो बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
विगतमा पनि यसरी नै नेताहरु आएर भोट माग्दै विकास गछौ भने उनले भने अहिलेका नेताहरु पनि उस्तै त होलान् भाषण गर्छन् जान्छन् मलाई त कत्ति विश्वास लाग्दैन । चुनावको बेला मात्रै आउने र चुनाव जितेर गईसकेपछि फर्केर आउैदनन् । हाम्रो एक दिनको भोट त्यसै खेर जानेत होला उनले भने भाषण गर्नुभन्दा पनि विकास गरेर देखाउनु प¥यो । ‘नेकपाले भने केही आशा लाग्दो काम गरेको छ ’ उनले थपे ।
यता प्रदेश सभा सदस्य पदमा नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी विमला वलीले स्वर्गिय उत्तरकुमार वलीले सडक, सिचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलपुलेसा लगाएतका विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउदै उहाँको सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएकाले बाँकी रहेका अपुरा विकास निर्माणलाई आफुले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।
मतदाताह संग भोट माग्दै उनले विकास नभएका गाउँबस्तीमा विकास निर्माण गर्ने दावी गरेकी छिन् । त्यस कारण आफुलाई भोट दिएर जिताउन उनले अपिल गरेकी छिन् । यस्तै काग्रेसका उम्मेदवार केशव आचार्र्यले आफु विगतदेखी नै समाज सेवामा तत्पर भएको बताउदै आफुलाई जिताउन अपिल गरेका छन् । जनताको सुखदुखमा साथ दिने भन्दै चुनाव जितेमा विकास गरेर देखाउने उनले दावी गरेका छन् ।
यस्तै समाजबादी पार्टीका उम्मेदवार डिल्ली बहादुर डाँगीले पुरा राजनितिक दलले समाजमा केहि विकास गर्न नसकेको आरोप लगाउदै अव आफुलाई भोट दिएर जिताउन अपिल गरेका छन् । यस्तै नेपाली काग्रेंस विपिका उम्मेदवार दिपक धितालले आफुहरु सधै राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै भोट दिन अपिल गरेका गरेका छन् ।